के मार्केटिफ्रासिंग एक महान् रणनीति हो? | Martech Zone
मंगलवार, सेप्टेम्बर 18, 2012 बुधबार, सेप्टेम्बर 19, 2012 Douglas Karr
मैले त्यो कसरी गरें? मैले लिए मार्केटिङ र यो सँगै फ्रेसिing। प्यारा, हु? म निश्चित छुईन कि कसैले मार्केटिंग रणनीतिमा शब्दहरू बनाउन को लागी एक शब्द बनाएको छ ... त्यसैले मैले भर्खर गरेँ।
निर्णायक अझै बाहिर छ कि म व्यक्तिगत रूपमा यो रणनीति प्रयोग गर्न चाहान्छु (यस पोष्ट बाहिर)। यस्तो देखिन्छ कि सबै ठाउँमा मानिसहरू आफ्नो सिद्धान्त वा उत्पादन वर्णन गर्न नयाँ शब्दहरू सोच्दैछन्। यो नयाँ छैन। The० को दशकमा फिर्ता ... सबै कुरा थियो केहि-ओ-मैटिक, स्वचालनको भावना प्रदान गर्दै। अब यस्तो देखिन्छ कि सबैले सँगै अक्षरवाचकहरू, वा नयाँ मार्केटिंग वाक्यांशहरूमा शब्दहरू स्लमिंग गरिरहेका छन्।
म केहि पनि देखाउन जाँदैछु किनकि ती मध्येका केही एकदम चलाख छन्। र म विश्वास गर्छु कि त्यो कुञ्जी हो ... तिनीहरू चलाख हुनुपर्छ (मूल्या rate्कन नगर्नुहोस्) marketiphrasing)। जब मैले केहि सामाजिक मिडिया नेताहरूमा प्रश्न सोधें, तिनीहरूले जवाफ दिए कि तिनीहरू दोषी छन्… उनीहरू प्रायः नयाँ रणनीति वाक्यांशहरू बनाउँदछन् तिनीहरूको रणनीतिहरूमा सहयोग पुर्‍याउन।
जेफ विडम्यान उनले उनीहरूलाई बनाउनेमा दोषी रहेको भने। र जेसन किथ, सामाजिक ताजा को सीईओ, रणनीति समर्थन गर्न केहि राम्रो अंक ल्याए। जेसनले एक अद्वितीय र क्लीभर सिर्जना गर्न benefits फाइदा प्रदान गर्‍यो मार्केटिफ्रेज। उसलाई थाहा थिएन कि मैले त्यो शब्द बनाएको छु जब म यसको बारेमा कुरा गर्थें… र ती प्रत्येकको छेउमा भएका विवरणहरू मेरो हुन्:
सोचेको नेतृत्व - यसले यस्तो प्रभाव प्रदान गर्दछ कि तपाईंले विषय गहिरो चिन्तन दिँदै हुनुहुन्छ र सडक तल जाँदै हुनुहुन्छ जुन कहिल्यै यात्रा गरिएको छैन।
कुख्यातता - यदि विचार फैलन्छ, यो एक शब्द हो जुन तपाईंको नाम, कम्पनी, उत्पादन वा सेवाको पर्यायवाची छ।
खोज इन्जिन अनुकूलन - यदि तपाईं शब्द आविष्कार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं त्यो शब्द अनलाईनमा बाँधिनुहुनेछ। फेरि, यदि यो फैलियो भने, मानिसहरूले तपाईंलाई कुनै पनि प्रतिस्पर्धीमाथि भेट्टाउनेछन्।
अद्यतन: ब्रायन कार्टर मार्केटिफ्रेजको लागि केहि राम्रो मार्केटिफ्रेसको साथ आयो ... नियोमार्केटिंग जीवहरू... वा सधैं व्यंग्यात्मक neogurulogism.
तपाईको मनपर्ने र कम से कम मनपर्ने के के हुन्? marketiphrases?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 18::2012० अपराह्न
स्कट मोन्टी द्वारा ट्वीटअप
HubSpot द्वारा इनबाउन्ड मार्केटिंग
कम चलाख तर अधिक व्यावहारिक। मसँग साथीहरू छन् जुन सर्त घृणा गर्दछ तर मलाई यो मनपर्दछ। प्राय: किनभने यसले राम्रो रूपले इनबाउन्ड र आउटबाउन्ड बिक्रीको साथ समन्वय गर्दछ।
इनबाउन्ड पुल मार्केटिंगको निजी लेबल अनुमति मार्केटिंगको एक निजी लेबल हो। त्यो ले भन्यो, यो त अझै पनि मेरो मनपर्ने तरीका त पुल पक्ष वर्णन गर्न को लागी हो। अब कसैलाई यि and र "आउटबाउन्ड मार्केटिंग" ठूलो स्वरमा गाउनु आवश्यक छ त्यसैले इन्टरनेट मार्केटिंगको सम्पूर्ण विश्व ग्राहकहरूलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ। सँधै सोच्थे कि हब्स्पटले यो गर्छ।
र अझै धेरै कम्पनीहरूले "इनबाउन्ड मार्केटि” "मा सबै विशेषज्ञ छन् हब्स्पटलाई।
जबसम्म व्यक्तिहरू जाँच गर्न जान्छन् र महसुस गर्छन् तिनीहरू सफ्टवेयर :-p को लागी एक महिना month २ pay० तिर्नु बिना गुगल एनालाइटिक्सबाट उनीहरूलाई के चाहिन्छ भनेर प्राप्त गर्न सक्छन्।
हबस्पट एकदम गजबको छ, यद्यपि! एनालिटिक्स एक्लै मूल्यको लायक छ।
सहमत मलाई उनीहरूको मार्केटिंग योजना र ढाँचा मन पर्छ तर, म डन्नो। मैले यसलाई फेरि हेर्नु पर्छ। यो एक समय भएको छ।
हबस्पट एक धेरै सुदृढ सफ्टवेयर हो। तिनीहरूको एनालिटिक्स समाधान तिनीहरू प्रस्ताव गर्दछन् 5-१०% हो। सीआरएम, ईमेल, लीड जेन, ब्लगिंग, एसईओ अंतर्दृष्टि र अधिक धेरै। तिनीहरू धेरै मार्केटि auto स्वचालन र सीआरएम प्रतिस्पर्धीहरू भन्दा छिटो नवीन पनि ल्याउँदैछन्।
प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ? सीआरएम तिनीहरूको हो वा तिनीहरू चिनी सेतो लेबलिंग गर्दैछन्? यस्ले कसरी काम गर्छ?
तिनीहरूसँग आफ्नै सीआरएम / सम्पर्क व्यवस्थापक छन् जुन मुख्य जेन सम्पर्कहरू र ईमेलमा केन्द्रित हुन्छ। र तिनीहरू सबै प्रमुख CRM हरूको साथ एकीकृत गर्दछ जुन मलाई यसको शीर्षमा थाहा छ। दुबै तरिकाहरू समक्रमण गर्दै।
उनीहरूको भर्खरको रिलीजमा अधिक जानकारी: http://www.hubspot.com/blog/bid/33574/Get-to-know-HubSpot-3-A-look-at-some-of-the-standout-features
आह ठिक छ। त्यो राम्रो छ
ट्वीटअप निश्चित रूपमा एक विजेता हो ... र अवश्य पनि मिटअपको सममिति ईन्जेनियस थियो।